जब देउवा निस्किएलगत्तै ओलीको कार्यकक्षमा पुगे प्रचण्ड…. — Sanchar Kendra
जब देउवा निस्किएलगत्तै ओलीको कार्यकक्षमा पुगे प्रचण्ड….
काठमाडौँ । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ ।
एमसीसीबारे छलफल गर्न बिहीबार बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक सूचना टाँसेर शुक्रबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएपछि प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच निरन्तर भेटवार्ता चलिरहेको छ ।
नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवनमा रहेको ओलीको कार्यकक्षमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता भयो । देउवा निस्किएलगत्तै माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड ओलीको कार्यकक्षमा पुगे ।
अहिले २ नेताबीच भेटवार्ता भैरहेको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ । एमसीसी, संसदको गतिरोध अन्त्यसहितका विषयमा शीर्ष नेताबीच भेटवार्ता भइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार साँझ फेरि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग कुराकानी गर्ने भएका छन्। बिहीबार दिउँसो संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा भएको छलफलपछि साँझ फेरि कुराकानी गर्ने सहमति भएको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले जानकारी दिए।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको थियो।
सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले एमसिसी पारित गर्न साथ नदिने भएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेसँग सहकार्यका लागि सघन संवाद गरिरहेका छन्। एमालेले एमसिसी पास गर्न पहिला संसद सुचारू हुनुपर्ने बताएको छ।
त्यसका लागि आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई संसदमा राख्न नमिल्ने उसको माग छ। आफूले कारबाही गरेका सांसदलाई नहटाएर सभामुख अग्नि सापकोटाले पार्टी फुटाउन सघाएको भन्दै उनलाई हटाउनु पर्ने माग पनि एमालेले अघि सारेको छ।
गठबन्धन अगाडि बढ्नेमा समस्या आइसक्यो : महामन्त्री थापा
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सत्ता गठबन्धन अगाडि बढ्नेमा समस्या आइसकेको बताएका छन् । संसद्‌ भवन नयाँ बानेश्वरमा सत्तारुढ कांग्रेस- प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीचको छलफलबाट बाहिरिँदै थापाले एमसीसीको विषयमै गठबन्धन एकठाउँमा नरहेकोले अब अघि बढ्नेमा समस्या आएको बताएका हुन् । तर, अब नयाँ समीकरण बन्छ त भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा कुनै जवाफ दिएनन् ।
दुई पार्टीको छलफलमा एमसीसीसँगको सम्झौतामा सहयोग गर्न एमालेलाई प्रधानमन्त्री देउवाले आग्रह गरेका थिए । ओलीले पार्टीभित्र छलफलका लागि थप समय मागेको नेता थापाले जानकारी गराए ।
‘प्रधानमन्त्रीजीले ओलीजीलाई तपाईंहरुले नै दर्ता गर्नुभएको सम्झौता हामीले अगाडि बढाएका हौं । यो देशकै प्रतिष्ठाको विषय हो । यसलाई पास गरौं भनेर आग्रह गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘ओलीजीले आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेर जवाफ दिन्छु भन्नुभयो ।’
सरकारको आग्रहमा बिहीबार सभामुख अग्नी सापकोटाले प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरेका थिए ।